Mmekọahụ - Ajọ egwu n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma
Mmekọahụ - a dị egwu Mmekọahụ & Nghọta
Mmekọahụ pụrụ ịbụ ihe dị egwu nye ndị emetụta
Nkwubi okwu mmechi - emela nlekorita nwanyi anya!
Okwu ahụ bụ mmekọahụ na-agụnye okwu mmekọahụ na texting ọ bụla na-agụnye mgbasa ozi mkpesa site na WhatsApp ma ọ bụ netwọk mmekọrịta dika Facebook. N'ozuzu, inwe mmekọahụ na-agụnye ịdepụta na ịkekọrịta foto na ihe ndị a na-enyo enyo yana akụkụ nzuzo.
A na-ewere ugbu a na-eto eto dịka ihe siri ike na-enweghị mgbagha, ebe ọ bụ na ezigara ma ọ bụ ebugo foto na-adaba na aka ọjọọ.
Mmekọahụ n'Intanet Na - aga - Mmezi mebere
Ọ bụghị n'oge na-adịghị anya, ihe oyiyi echere maka ndị enyi ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-ejedebe na ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ, nke ndị na-enye ọrụ n'enweghị nkwenye onwe ha na-eji.
N'ụzọ bụ isi, ozi ọ bụla ezitere na ọdịnaya chiri anya bụ ihe ize ndụ, n'ihi na emetụta ya n'oge a kachasị ike ma gharazie inwe ike ịchịkwa ikike ịghachite.
Gini mere inwe mmekorita nwoke na nwanyi ji adighi nma?
Karịsịa ndị na-eto eto na-eto eto na-achọ ịchọpụta ihe nye ndị ọgbọ ndị ọzọ. Mgbe mgbe, a na-ezigara ndị enyi ha ihe dị mkparịta ụka ka ha gosipụta àgwà ọma nke ahụ ha na ito ha.
N'ụzọ dị otú a, ndị na-eto eto na-ebuli onwe ha elu ma na-erite uru site n'ịlụ mmekọahụ. Tụkwasị na nke ahụ, izipụ ọdịnaya mkparịta ụka na-ejikarị mee ihe na mmekọrịta iji gosi onye òtù ọlụlụ ịhụnanya na agụụ mmekọahụ.
N'ezie, inwe mmekọahụ na-etinye ụfọdụ ihe ize ndụ maka ndị ọrụ, ebe ọ bụ na ndị a bụ karịsịa ndị na-eto eto. Dịka ị maara, mmekọrịta agaghị adịte aka n'oge a, ọ bụ ya mere otu onye ga-eji mee ka onye ọzọ nwee ike ime ihe ọ bụla. N'ebe a, a na-eyikarị foto nke foto ahụ, ọtụtụ n'ime netwọk mmekọrịta dịka Facebook ma ọ bụ Twitter.
Mmechi - lelee, ebe ị na-ekpughe ihe banyere onwe gị!
Ma ọbụna n'amaghị ama, ọ nwere ike ịbịa iziga ọdịnaya ahụ, ọ bụrụ na, ọ bụrụ na e zigara ozi Whatsapp ozi na mberede, ọtụtụ ndị. Na mgbakwunye, a na-echekwa foto na-akpaghị aka, nke nwere ike iduga n'ọnọdụ ihere mgbe igosi gallery ya iji gosiputa foto ndi mmadu.
Inwe ihe ngosi nke ndi mmadu na-adighi obi ojoo bu ihe egwu di egwu, n'ihi na enwere ike iwere nke a dika ihe gbasara umu ihe ndi ozo.
Kedu ka ị ga-esi chebe onwe gị dịka onye nata ma ọ bụ onye na-enye ihe ize ndụ dị ka o kwere omume?
Dị ka onye na-ezipụ tupu izipu njikwa ọdịnaya ọkụ. Ị ga-elele akara ntanye ugboro abụọ ma ṅaa ntị na ntọala ekwentị.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ebuga foto na Facebook, a ga-akọwa kpọmkwem ndị na-ege ntị. Tụkwasị na nke ahụ, njirimara ndị ahụ ekwesịghị igosi ihu ma ọ bụ atụmatụ pụrụ iche, nke mere na ọ gaghị emebi na nkesa dịka onye aja. Ọ bụrụ na mmadụ na-enweta foto foto na-ese foto, onye kwesịrị ihichapụ foto ahụ n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịchọpụta ozugbo.
Site na nke a, otu onye enweghịzi ihe omumu nke nwa okorobia ma ya mere n'ezoghi ya. Tụkwasị na nke a, ihe ize ndụ nke akwụkwọ a na-achọghị ma ọ bụrụ na ndị enyi ma ọ bụ ọnwụ ejiri iji smartphone eme ihe.
Mmekọahụ na-eji arụmụka nke ọtụtụ ndị na-eto eto eme ihe n'echeghị anya, nke na-eme ka mgbasa ozi na-achọghị. N'ezie, dịka onye dị afọ iri na ụma, ndị enyi gị nwere ike ịmanye gị ma zipụ foto ndị nwere foto site na nrụgide ndị ọgbọ.
Ka o sina dị, ọ dịghị onye ga-achọ ịpụta na ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ n'enweghị nkwenye ha, ya mere, n'ụzọ nkịtị, ọ ga-agba ọtọ n'ihu ọtụtụ nde mmadụ.
Ya mere, ọ dị mkpa ka ọ dịkarịa ala hụ ihe ize ndụ ndị dị na mmekọahụ na iji mee ihe kwekọrọ na ya. Ị kwesịrị ị na-ege ntị mgbe niile onye ị na-ezipụ foto ma ma ọ bụ na ị na-emeghị ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụrụ na ị na-edebere Smartphone ntọala, kọọrọ ya kọntaktị niile. A na-atụ aro ya karịsịa ka iziga ọdịnaya ihe na-eme ka ị bụrụ onye a na-apụghị ịmata ma ọ bụ ihu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Na njedebe, enwere ihe iyi egwu mgbe niile, n'ihi ya, ị ghaghị ịjụ ajụjụ gbasara mkpa ọ dị na nwata a.
Masturbation | mmepeanya
Nghọta - nhazi na ọrụ nke ara nne
Kedu ihe bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị - Ntak ịhọrọ otu ...
Kedu ihe bụ uri Akwụkwọ ịgụ akwụkwọ
Rụghachite - iji mee ka ụlọ ochie gbanwee
Agbamakwụkwọ - Nke a bụ otú agbamakwụkwọ ahụ si bụrụ ihe ịga nke ọma